युरोपेली युनियनबाट बेलायत बाहिरियो : युनियन र बेलायत कसलाई कति घाटा ? :: NepalPlus
नेपालप्लस विशेष संवाददाता /फ्रान्स२०७७ पुष १६ गते १९:०१
अन्तत : बेलायत आज डिसेम्बर ३१ को मध्यरातदेखि युरोपेली युनियनबाट बाहिरिनेनै भयो । युरोपेली परिषदका २७ देशसित बाँडेर खानुभन्दा एक्लै ठूलो भाग खान भनेर छुट्टाभिन्न भएको छ बेलायत । तर युरोपेली युनियनबाटबाट छुट्टिएपछि के बेलायतको आर्थिक सम्पन्नता बढ्ला ? अर्थविद, विश्लेषकहरुका अनुसार युरोपेली युनियनबाटबाट बाहिरिनु (जसलाई ब्रेक्जिट भनेर बुझिन्छ) बेलायतकालागि ठूलो आर्थिक घाटा हो ।
ब्रेक्जिटसँगै बेलायतलाई बढि घाटा छ । ब्रेक्जिट पछि भन्सार र सीमा नियन्त्रणको पुरानै अवस्थामा फर्किनाले बेलायतलाई त्यो नियन्त्रणमा पनि महँगो पर्ने छ ।
ईयूका प्रमुख वार्ताकार मिशेल बार्निरले पत्रकारहरुलाई भनेका थिए, “सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा हुने फाइदा र सुविधाहरू त्याग्न बेलायतले युरोपियन युनियन र एकल बजार छोड्ने निर्णय गरेको छ । हाम्रो सम्झौताले यी अधिकार र सुविधाहरूको पुन: सुनिस्चित गर्दैन । त्यसैले यो सम्झौताको बाबजुद अबदेखि केहि दिनहरूमा वास्तविक परिवर्तनहरू हुनेछन् ।”
त्यसो त बेलायतलाईपनि ब्यवशायिक घाटा छ । जनवरि २०१९ मा फ्रान्सको एटलान्टिक महासागरको तटिय भागमा अवस्थित नोर्मदी क्षेत्रमा ५३ वटा ब्यवशायिक संस्था थिए । त्यसको अर्थ १० बिदेशी संस्थामध्ये एक बेलायती हो । यसको अर्थ नोर्मदी प्रान्तमा बेलायती चौथो ग्राहक र सातौं आपूर्तीकर्ता हुन् । नोर्मदी सामुद्रिक बन्दरगाह मध्येको एक महत्वपूर्ण हो ।